Akara ụlọ ọrụ, ndị na -ebubata ya - China Stamping Manufacturers
All usoro nke metal stamping
All usoro nke machining nwoke ...
All usoro nke ịghasa omenala ...
Ọrụ nkwado maka mmadụ niile ...
CNC machining obere ọla p ...
Otu ọrụ nkwụsị maka stampụ ọla
Akụkụ stampụ bụ akụkụ igwe mpempe akwụkwọ, ya bụ, akụkụ enwere ike ịhazi ya site na stamping, ihu, ịgbatị na ụzọ ndị ọzọ. Nkọwa izugbe bụ - akụkụ nwere oke ọkpụrụkpụ mgbe niile na nhazi nhazi. Akụkụ ndị kwekọrọ na ya bụ akụkụ nkedo, akụkụ ịkwa akwa, akụkụ igwe, wdg. Dịka ọmụmaatụ, shei igwe na -abụghị ụgbọ ala bụ metal sheet, na ụfọdụ arịa kichin nke igwe anaghị agba nchara bụkwa mpempe akwụkwọ. Stampụ bụ ụdị teknụzụ nrụzi ụgbọ ala, ya bụ ịrụzi t ...
OEM ODM metal stamping nhazi
Ihe ndị achọrọ maka ọdịdị akụkụ zoro ezo zoro ezo nke ọla, a nwalere ọtụtụ ngwaahịa anyị na -eji ugbu a. Naanị ngwaahịa ruru eru ka enwere ike ịnapụta n'ụlọ nkwakọba ihe, yana ngwaahịa ejiri akụkụ stampụ ọla edozie bụ otu. Yabụ kedu ụdị akụkụ stampụ ọla nwere ike weere dị ka ihe ruru eru? Ọ bụrụ na -agbaji akụkụ zọcha nchara nchara ngwa ngwa ejiri ya, ngwaahịa a ọ tozuru oke? Xiaobian na -esote ga -akọwara gị otu teknụzụ nhazi nke stampụ ọla ...
Ọrụ ngwaahịa ngwaahịa stampụ dị elu
1. Na usoro akụkụ nkenke zoro ezo nke metal, ọnwụ na -ahụ maka akụkụ na ịdị mma nke akụkụ stamping metal, n'ozuzu anaghị emebi ogo akụkụ stamping, yana ndụ ọrụ nke ịnwụ na -adịkarị ogologo, yabụ ịdị mma nke stamping igwe kwụ chịm. 2. Akụkụ nkenke nke ngwaike nwere ike hazie akụkụ nwere oke nha yana ụdị dị mgbagwoju anya, dị ka elekere elekere nke elekere na elekere, okporo osisi ogologo ụgbọ ala na akụkụ mkpuchi. Agbakwunyere na oyi ...
Ụdị nkwarụ dị iche iche nke akụkụ stampụ ọla: mgbape: ihe igwe na-agbaji n'oge stamping Scratch: oghere dị warara dị ka wara wara n'elu ngwaike Scratch: mmebi nke kọntaktị na esemokwu dị n'etiti ihe dị n'elu Oxidation: ihe ahụ na-agbanwe kemịkal na ikuku oxygen na nrụrụ ikuku: mgbanwe ọdịdị pụtara site na ihe mgbe a na -akụ stampụ ma ọ bụ na -ebufe Burr: a naghị ahapụ ihe njupụta kpamkpam n'oge ịkụ ọkpọ ma ọ bụ ịkpụ nkuku Convex Dent: adịghị mma ...
Ngwaahịa apụta, Map saịtị, Ihe nkedo, Mpempe akwụkwọ ọla zọ ngwaahịa, Aluminum CNC Machined Parts, Akụkụ stampụ nke nnukwu, Ọnwụ nkedo Magnesium, Mmiri Efere, Ngwaahịa niile